Indlu epholileyo yasemaphandleni kwidolophu yakudala yaseBullas - I-Airbnb
Indlu epholileyo yasemaphandleni kwidolophu yakudala yaseBullas
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguÁngeles
Indawo yethu yokuhlala ikwimigangatho yokuqala yendlu endala ehlaziyiweyo, esembindini wedolophu endala. Ineendawo ezinkulu eziqhelekileyo: iholo, igumbi lokuhlala-iofisi enebalcony, igumbi lokuhlambela elineshawa, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo-iofisi enendawo yomlilo, kunye nethafa elinefenitshala yangaphandle. Kananjalo inamagumbi amabini okulala, elinye linebhedi ephindwe kabini, ebandakanya iitafile ezisecaleni, iwadilophu kunye nesifuba sedrowa; kunye nenye, encinci, enebhedi yemisebenzi emininzi (eyodwa okanye ephindwe kabini), kunye ne-wardrobe.
Indlu enodonga olungqingqwa iqaqambe kakhulu ngenxa yeefestile ezinkulu zegumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Kwabanye, ibekwe kwiindawo eziphakamileyo ezimbini, zahlulwe ngamanyathelo amathathu, nto leyo enika amandla amakhulu.
Kuyinto eyaziwayo indawo ethule kakhulu (yonke imihla ibonakala ngeCawe!), Nangona kubalulekile kakhulu, njengokuba kubhaliwe sayifumana amanyathelo ezimbalwa ukusuka Plaza de España, apho Hall Town, iCawa, i House of Culture, njalo njalo, kunye ne-Old Square kunye ne-Arch. Njengoko ifanele idolophu endala, indawo enkulu yezitalato zasebumelwaneni zigqunyiwe. Nangona kunjalo, iimoto zinokuhamba kwindawo kwaye kulula ukufumana indawo yokupaka kwindawo eyingqongileyo.
Kufuphi nendawo yokuhlala kukho i-oveni yomthi, kunye nevenkile enomtsalane yezandla, kwaye ukusuka apho uya kuba nakho konke ukunikezelwa kokubuyiselwa kwenkcubeko kunye nendalo yeBullas kunye neNgingqi yonke.
Ukongezelela, kulapho imarike yeZacatín edumileyo ibanjelwa khona ngeCawa yokuqala yenyanga nganye. Kwaye imingcelele yeVeki eNgcwele yenza umngcelele apha.
Umbuki zindwendwe ngu- Ángeles
Ewe kunjalo, sobabini nomyeni wam siya kufumaneka ukuze sinamkele, sicacise yonke into oyifunayo malunga nendawo yokuhlala, kwaye sikukhokele malunga nento omawuyibone kwaye uyenze eBullas nakuMmandla oMntla-ntshona weMurcia.